चुकन्दर सायद धेरैले खादैनन् तर यो पढेपछि पछुताउने छन् कि किन खाइएनछ भनेर ? – List Khabar
Home / जीवनशैली / चुकन्दर सायद धेरैले खादैनन् तर यो पढेपछि पछुताउने छन् कि किन खाइएनछ भनेर ?
चुकन्दर सायद धेरैले खादैनन् तर यो पढेपछि पछुताउने छन् कि किन खाइएनछ भनेर ?
admin February 9, 2022 जीवनशैली Leaveacomment 70 Views
चुकन्दर सायद धेरैले खादैनन् तर यो पढेपछि पछुताउने छन् कि किन खाइएनछ भनेर ? प्रकृतिले यस्ता फल वा खानेकुरा दिएको छ, जो त्यही समयका लागि अति उपयोगी हुन्छ ।
अर्थात जाडोको मौसमका जे जति खानेकुरा उत्पादन हुन्छ, त्यो त्यही मौसममा हाम्रो शरीरले माग गरिरहेको हुन्छ । त्यस्तै उत्पादन हो, चुकन्दर । सलादको रुपमा धेरैले चुकन्दर सेवन गर्छन् । गाढा रातो रंगको चुकन्दर सलगम जस्तै हुन्छ । यसले शरीरमा रगतको मात्रा बढाउन सहयोग गर्छ । यसमा आइरन पाइन्छ । आइरनका साथै यो भिटामिन सिको राम्रो स्रोत हो ।
यसको नियमित सेवनले भिटामिन ए, बी, बी-१, बी-२, बी-६ र भिटामिन सिको पूर्ति गराउाछ । धेरैलाई थाहा छैन कि, चुकन्दरमा फलाम तत्व अधिक हुदैन तर, यसबाट प्राप्त हुने फलाम तत्व उच्च गुणवत्ता हुन्छ । जसले रक्र निर्माणमा विशेष महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यहि कारण चुकन्दर चुकन्दरको सेवनले शरीरको अनेकौ हा-निकारक पदार्थ बाहिर निकाल्न फाइदाजनक मानिन्छ ।
यसकाे पात पनि फाइदाजनक:- चुकन्दरको पात पनि निकै फाइदाजन मानिन्छ । चुकन्दरको पातमा फलको तुलनामा धेरै मात्रामा फलाम तत्व पाइन्छ । पत्तामा भिटामिन ए पनि भरपुर मात्रामा पाइन्छ । पातको सेवनले पनि शरीरको विकारयुक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ । यसले प्राकृतिक क्लिन्जरको रुपमा काम गर्छ । चुकन्दरमा पोटाशियम, सोडियम, क्याल्शियम, म्यानिज, फाइबर आदि पर्याप्त हुन्छ । सुपाच्य खाद्य पदार्थ भएकाले चुकन्दरको सेवनले पर्याप्त उर्जा पनि प्रदान गर्छ ।
चुकन्दरको गाढा रातो रंग के हो त ?:- हेर्दै रहर लाग्दो गाढा रातो रंग हुन्छ, चुकन्दरको । आम बुझाई छ, यो रातो रंग फलाम तत्वको प्रचुरताको कारण हुन्छ । यद्यपी सत्य के हो भने, चुकन्दरको गाढा रातो रंग यसमा पाइने एक रंगकण अर्थात बीटा सायनिनको कारण हुन्छ । चुकन्दरमा पाइने फोलिक ए-सिड, पोटेशियम वा मुलायम रेशाले पनि यसको पौष्टिक गुणलाई बढाउँछ । एन्टी अक्सिडेन्ट गुणको कारण यो रंगकण स्वास्थ्यका लागि एकदमै राम्रो मानिन्छ ।
चुकन्दरमा पाइने फोलिक ए-सिड, पोटेशियम वा मुलायम रेशाले पनि यसको पौष्टिक गुण बढाउँछ । चुकन्दरको नियमित सेवनले सम्पूर्ण शरीरलाई निरोगी राख्छ । हाल हाम्रो दैनिक आहारमा चुकन्दरले उचित स्थान पाएको छैन । यद्यपी नियमित रुपमा यसको सेवनले कतिपय रोग निर्मूल हुन्छ । साथसाथै यो सौन्दर्यको पनि खजना हो । यसले हेमोग्लोबिन बढाउाछ, फलत अनुहारको चमक बढ्छ ।
हाम्राे न्युजहरु हजुरहरुलाई कस्ताे लाग्छ सल्लाह सुझाव को लागि हामिलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ ।। तपाइको एक सेयरले थाहा नपाएकाले जानकारी पाउनेछन भने हामीलाई पनि सहयोग पुग्नेछ ।
Previous शिक्षकले विद्यार्थीसँग गरे यस्तो हर्कत, जाे देख्दा तपाईंको छक्क पर्नुहुनेछ (भिडियो हेर्नुस्)
Next साबधान ! फेरी आयो काठमाडौं बासीलाई यस्तो दुखद खबर, सचेत रहन आग्रह :